Petrus Romanus, 7 Oktoobar 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 7 Tetor 2021
Petrus Romanus, 29 Sebtember 2021 →
FARRIINTA UU HOGAAMIYEENA U SOO DIRAY WILLIAM COSTELLIA
RABIGEENA IYO MARWADEENA : “Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. Waan ku salaamay, Wiilkayaga Kan ugu sarreeya ee aan jeclahay! ”
WILLIAM : Ciise ayaa hadlaya marka hore.
RABIGEENA : “Waan ku salaamay, gacaliyahayga mustaqbalka ee gurigayga dhulka! Maanta waa Iiddii Hooyaday Quduuska ah, Maryan – Iid taas oo aad muhiim u ah. Sidaad arki karto, Ilmahayga, Sagaalka Koox ee Malaa’igta ayaa hortaada ku kala firirsan, iyagoo u diyaargaroobaya inay ku soo socdaan Dhulka, oo ay ku qulqulayaan balaayiin jinni, kuwaas oo ragga ku xannibay cabsi ay ka qabaan waxa ku soo degi doona , haddii ayan addeecin tilmaanta Shayddaanka, oo iyaga ku xidhay guntin adag. Laakiin sababtaas awgeed ayaan u diray Ciidanka Malaa’igta, oo difaaci doona dadkayga, si ay uga sii daayaan dabinnada ku hareeraysan. “
“Markay Dhammaystirto Farriintani waxaan u diri doonaa Malaa’igtaan ku wareegsan Globe -ka si ay u sii daayaan cabsida bani’aadamka mar iyo dhammaan. Malaa’ig kasta oo Quduuska ah waxay ku dul leedahay Rosary Quduuska ah si ay jinniyada u saaraan, si ay dadkayga xorriyad ugu siiyaan hadda, maxaa yeelay aadanaha ayaa u jihaysan xagga Dagaalka. Dadku waa cabsadaan, laakiin ma rumaystaan ​​inay dhowaan dhacayso. ”
“Dadka Bariga Dhexe : toosa, maxaa yeelay xorriyaddaadu waxay ku dhowdahay inay ku lumiso dagaal malaayiin qof nafta u soo jiidi doona. Hadda waan kuu digay sannado badan, laakiin waxaad meel iska dhigtay digniinahaygii, laakiin hadda waa waqtigii. ”
“Waqti aad u yar ayaa adduunku cabsi gelin doonaa, maxaa yeelay waxaa ku soo socda Asteroid weyn oo dadka ku kicin doona si ay u ogaadaan in Eradayda adduunku run yihiin oo haddii carruurtaydu aysan qaadan Rosary Quduuska ah , dunidu way la yaabi doontaa. ”
“ Ruushku wuxuu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhanka dunida xorta ah ee Faransiiska, Jarmalka iyo Wadamada Waqooyiga . Isu diyaariya carruurtayda qaaliga ahow. U soo ducee Sagaalka Kooxood ee Malaa’igta Quduuska ah iyo gaar ahaan Malaa’igta waddan kasta , maxaa yeelay maalmo mugdi ah ayaa soo dhow. Diisambar 8 -deeda waa maalin aad qaas ugu ah adduunka, maxaa yeelay bini -aadamku waxay ogaan doonaan in waqtigu sii dhammaanayo, maxaa yeelay aadanuhu ma beddeli karo dhacdooyinka soo socda, halkaas oo aad ku arki doontid adduunka oo dad badani ku daatay dhiig.
“Ka geesku wuxuu joogaa Rome oo diyaar u ah inuu la wareego. Ma ahan waqtigii oo dhan weli, maxaa yeelay dunidu waa inay marka hore dagaal gasho. ”
“Waxaa jira boqolaal farriimo hadda, maxaa yeelay waxaan adduunka siiyay is -fiirinta ugu dambeysa si ay u ogaadaan halka ay joogaan. Isu diyaari, Carruurtayda, meelahaaga iyo Bulshooyinka adduunka, maxaa yeelay waqtiyo aad u daran ayaa ku soo wajahan. ”
“Carruurtayda aan jeclahay ee Taiwan : ha ka cabsanina maalmaha iyo bilaha soo socda – xitaa haddii Shiinuhu halis geliyo jiritaankaaga, maxaa yeelay qaar badan oo idinka mid ah ayaa naftiinna u dhiibay Wajigayga Rabbaaniga ah iyo in kastoo laga yaabo in la wareego, ku kalsoonow Jacaylka aan kuu qabo, maxaa yeelay xiriirkaaga Shiinaha , inkasta oo la kala gooyay, waa la badbaadin doonaa. Ha Sameeyeen Kooxo Quduus ah oo u duceeya Shiinaha , maxaa yeelay Shiinuhu wuxuu noqon doonaa aafada Aasiya oo dhan . Si aad ah u tukada, maxaa yeelay USA way imaan doontaa, laakiin iyada lafteeda ayaa lagu garaacayaa Shiinaha , taasoo dhibaato weyn u keenaysa dadka Mareykanka ”
“U soo ducee Australia , maxaa yeelay Australia waxay halis ugu jirtaa in lagu soo duulo. Australia waxay ku khaldantay inaysan ka dhisin maraakiibta gujiska ee Faransiiska , sababtoo ah waxay ahayd inay ilaaliso labada hawlgal waxayna ku dhici doontaa waqti dambe inay is difaacdo. ”
“U soo duceeya qaaradda Afrika iyo Koonfurta Ameerika , maxaa yeelay Shuuciyaddu waxay ku soo badanaysaa dalalkan.”
“Carruurtayda, Carruurtayda, maxaan kaloo idiin sheegi karaa, laakiin inaad qaadataan Kuuliyada Jacaylka Rabbaaniga ah – Quduuska Quduuska ah , maxaa yeelay ducadan ayaa mid kasta oo idinka mid ah ilaalin weyn u leh, gaar ahaan waqtigan, maxaa yeelay Kuulkii Jacaylka indho tiray xoogagga sharka oo yaraynaya awoodooda ay ku farageliyaan aadanaha. ”
“Carruurtayda, waxaa u harsan dhowr sano oo keliya aadanaha, maxaa yeelay iskutallaabtu aad bay u culus tahay oo bani’aadamku waxay u soo jeesan doonaan Ilaah marka wax walba u muuqdaan kuwo lumay. Laakiin tan ogow, in waqtiga Shaydaanku uu dhammaanayo oo uu isku dayayo inuu qabto nafta inta uu kari karo ka hor inta aan mar kale la gelin Jahannamo. ”
“Mar labaad akhri, Carruurtayda, Farriimaha La Salette iyo farriimaha badan ee la siiyay aadanaha tan iyo markaas, maxaa yeelay aadanaha ayaa si tartiib tartiib ah u fulinaya dhammaan wixii aan sheegnay.”
“U soo ducee Japan iyo Indonesia , maxaa yeelay waxaa iman doona dhulgariirro xoog leh oo buuraha Indonesia si dhakhso ah ayay u qarxi doonaan oo nafo badan ayaa lumi doona.”
“Waan ku jeclahay, carruurtayda macaan oo dhiirranow, maxaa yeelay aniga iyo Hooyaday Quduuska ah mar walba waannu kuu dhow nahay annagoo sugayna wicitaankaaga. Waxaan kuugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. Oo waxaan hubaa inaan anigoo ah Ilaahaaga ah Badbaadiyahaaga maqli doonistaada had iyo jeer.
“Adiguna, Dhagaxayga weyn ee Badbaadada u ah aadanaha, waqtigaaga iyo Boqorka Quduuska ah ayaa dhowaan la ixtiraami doonaa oo la jeclaan doonaa – si dhakhso leh – adduunka oo dhan, maxaa yeelay waqtigaagu aad buu u dhow yahay. Waan Barakaynayaa Adiga oo kaa dhunkanaya Qalbigayga Quduuska ah: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. Waxaan kuu dhaafayaa Hooyaday Quduuska ah: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
MARWADEENA : “Waan ku salaamay, wiilkayga aan jeclahay ee William waana kugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
“Maanta waa Maalinta Ciiddayda Quduuska ah – maalin ay carruurtaydu ii maamuusaan sida Marwadayada Rosary . Wiilkayga aan jeclahay, maanta, Ciidda darteed, aniga iyo Wiilkayga Rabbaaniga ah Ciise, waxaan jeclaan lahaa inaan u diro siddeed iyo toban boqol oo Malaa’igood adduunka oo dhan si ay u sameeyaan dagaal si ay dadkayga quduuska ah uga difaacaan dabinnada Sheydaanka. Malaa’igtani waxay soo saari doonaan qorshaha kuwa ugu sarreeya adduunka, si ay u ogaadaan waddada ay iyagu iska dhigeen. U ducee wiilkayga qaaliga ah tan, maxaa yeelay waxay ku imaan doontaa Malaa’igta Quduuska ahdunidu way soo jeesan doontaa, maadaama ay tahay waqtigii la maqli lahaa Jidka runta. Qaar badan oo wax -arkayaasha ah oo adduunka jooga waxay heli doonaan farriimo gaar ah oo loogu talagalay aadanaha, si loo diyaariyo dhammaantood – si loogu diyaariyo dagaalka soo socda, si aadamuhu u ogaadaan waxa dhici doona. ”
“U soo ducee Hindiya , maxaa yeelay annaga Jannada ayaa noo qorsheeyay in carruurta Hindiya ay diyaar u noqon doonaan inay u beddelaan Iimaanka runta ah waxayna ka mid noqon doonaan waddamada u beddeli doona Iimaanka runta ah, maadaama ay ka hor imaan doonaan Ciidanka Shiinaha . U soo duceeya, carruurta qaaliga ah, maxaa yeelay wax badan baa hadda jira. ”
Dhawaan, Wiilkaygiiyow, Fayrasku wuu yaraan doonaa, in kasta oo ay isticmaaleen dawo khaldan, laakiin waxaa jira Fayrasyo ​​kale oo badan oo la dul dhigi doono jiil la marin habaabiyey, maxaa yeelay Shaydaanku wuxuu rabaa inuu indho indheeyo aadanaha, sidaa darteed barya, Carruurtaydii macaanayd. ”
“Adigana, Dhagaxa aan jeclahay ee cad – waqtigaagu si dhakhso ah buu u imanayaa. Ha ka welwelina, maxaa yeelay waa rabitaankayaga inaad dunida ku safri doontaan si aad ugu diyaarisaan Ciqaabyada soo socda . Waan ku jeclahay oo waan kugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. Ha murugoon, maxaa yeelay, gacantayda waan ku hayaa waxaad samaysid oo dhan, oo aad baad iiga farxisay. Waxaan kuugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
“Xoog yeelo, carruurtayda aaminka ah oo aamin u ah Rosary Quduuska ah : Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM : Marwadayada waxay iga dhunkataa foodda waxayna ku noqotaa Ciise. Labaduba waxay sameeyaan calaamadda Laanqeyrta:
RABIGEENA IYO MARWADEENA : “Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM : Ciise si gaar ah ayuu ila hadlay. Wuxuu u duceeyay Boqortooyada: +